ဂျင်းအချစ်နဲ့တော့ လာမချစ်နဲ့. မကြိုက်ဘူး..ဆိုတဲ့ မိစန္ဒီ - Myanmarload
ဂျင်းအချစ်နဲ့တော့ လာမချစ်နဲ့. မကြိုက်ဘူး..ဆိုတဲ့ မိစန္ဒီ
လွန်ခဲ့သော ၇ လ က 10:38 July 11, 2018
နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိစန္ဒီကတော့ လတ်တလောမှာ ပွဲတွေတက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အသံချိုချိုလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဖမ်းစားတက်ပြီး အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလည်း အချိန်အတော်ကြာဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ယခုထိတိုင်အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ဦးအပါအဝင်ပါပဲ။
ရုပ်လေးရောအသံလေးပါ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်နေတာ အချိန်အတိုင်းအတာ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီး အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း အများအပြားပါပဲ။ယခုအခါမှာတော့ သူမရဲ့ ဂျင်းဖက်ရှင်လေးနဲ့လှနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတော့ "ဂျင်းအကျီၤ ဝတ်ရတာ ကြိုက်တယ်..ဂျင်းအချစ်နဲ့တော့ လာမချစ်နဲ့. မကြိုက်ဘူး..အယ်လယ့်"ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ဂျင်းဖက်ရှင်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စတိုင်အမိုက်စားလေးနဲ့ လှနေသူလေး မိစန္ဒီရဲ့ ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း အားပေးစကားလေးတွေပြောခဲ့ကြပါအုံးနော်...